Fanfahana amin’ny asan’ny Devoly ny fanahy manambady
Toriteny sy Fampianarana /
Miarahaba antsika amin’ny anaran’I Jesosy Kristy Tompo!
Andro Voalohany: manoratra ny fahotana rehetra manodidina ny fijangajangana.
Andro faha 2: ibebahana ny fahotana rehetra voasoratra.
Andro faha 3: manao fisarahana tanteraka na divorce amin’ny devoly. Mahakasika ity dingana fahatelo ity, dia mety hisy ihany koa, tsy hoe ny manambady fanahy ihany, fa misy efa miteraka, mitaiza zaza, na mampinono ihany koa! Be dia be ny tranga mampivarahiontsana, tahaka izay niseho tamin’ny lehilahy iray.
Nanonofy aho, hoy izy, bevohoka zaza anankiroa, dia nodidina ny kiboko avy eo nangalana ireo zaza ireo. Zava-doza! Efa bevohokan’ity fanahy manambady ity lehilahy ity, ary raha tsy voavonjy, dia hiafara amin’ny fandidiana azy mihitsy, amin’ny aretina sy ny asa ratsin’I Satana ao anaty kibo ao. Marina ny voalazan’ny Baiboly: Ny bibilava miantoratoraka hanao ny lavany any ka hanatody sy hifana ary hikotrika ao amin’ny alokaloka any (Isaia34:15a); mikotrika ny atodin’ny menarana izy. Ary manenina ny tranon-kala; izay homana nyy atodin’ireny dia ho faty, far aha poritra iny, dia menarana no miporitsaka avy ao” Isaia 59:5).
Raha izany no miseho, dia efa tena manan-janaka devoly ao an-kibo ao ilay olona. Na ihany koa efa niteraka devoly izy. Inona no fiantraikan’izany, eo amin’ilay olona misy iilay fanahy manambady? Mazava hoazy fa tsy hahazo zaza intsony izy, rehefa niteraka tamin’ilay devoly. Saro-piaro be mantsy ilay devoly manambady, tsy avelany intsony hanambady na hiteraka amin’ilay vadiny izy! Izany no mhatonga ny fahamombana, ny zaza an-tsosokoditra, ny fahafahanjaza, ny fahafatesana eo am-piterahana, ny zaza farofy lava, na ny fahafatesana eo amin’ny zaza menavava sy ny ankizy mihitsy aza. Izany no antony tsy maintsy anaovana ireto fanafahana ireto raha:
- Manonofy bevohoka hafahafa tahaka ilay tery ambony ilay olona: esorina amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazarteta ilay zanaka devoly ao an-kibo ary atsipy any amin’ny helo. Tena miteny mihitsy hoe: “Amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazareta, tsy bevohokan’ny devoly izany aho, ary tsy mananjanaka devoly, noho izany dia esoriko amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazareta ny zanaka devoly ato anatiko”.
- Nanonofy nampinono na nitaiza zaza hafahafa. Ohatra amin’izany Ramatoa iray nanonofy nampinono izy, dia zaza maty no teo an-tratrany, ninono teo aminy. Rehefa nojerena ny lohanono dia efa feno poizin’ny devoly. Na ihany koa tranga anankiray hafa: nanonofy nitrotro zaza ity ramatoa iray, dia avy hono olona anankiray nitondra antsy nanindrotsindrona ilay zaza teo an-tratrany, fa tsy nandeha rà, tsy maty tsy naninona ilay zaza. Izany no porofo fa tsy olombelona io tezainy io fa fanahy ratys. Noho izany, tsy maintsy ariana amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazareta ilay zaza, ary ariana any amin’ny helo mirehitra afo! Tsy maintsy ataontsika izany, mba tsy ny tenantsika rehetra no ho voafatotry ny devoly ka ho very any amin’ny helo: “Far aha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao; fa ùmahasoa anao na dia very azan y iray momba ny tenanao, ka tsy ny teninao rehetra no hariaan any amin’ny helo” (Matio 5:29).
Mba hahatanteraka ny fibebahana, dia tsara ihany koa ny manao fifadian-kanina, araka izay azo atao mandritry ny telo andro. Fahamasinana tanteraka no takiana ihany koa mandritr’izany.
Rehefa vita tsar any fibebahana telo andro dia dorana ny taratasy mirakitra ny fahotana izay natao.
Fandroahana ny devoly fanahy manambady sy ny fanahy ratsy miaraka aminy. Tsara marihina aloha, fa tokony hisy mpanompon’Andriamanitra hafa efa voahosotra handroaka ny devoly amin’ny olona izay, izay voafatotry ny fanahy manambady. Olona izay manana ny Fanahin’Andriamanitra afaka halmaha ny mpifatotra sy hamoaka ny ao an-tranomaizina: “Ny Fanahin’I Jehovah no ato amiko, Satroa nanosotra Ahy history teny soa mahafaly amin’ny malahelo izy; naniraka Ahy history fandefasana amin’ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, Hanafaka izay nampahoriana” (Lioka 4:18). Arak’izany tsy mety ny mitompo teny fantatra ka mihevitra fa ny tena ihany no hamaha na hanapaka ny gadra mamatotra ny tena. Azo atao ny manatona ilay olom-boahosotra, ny any am-piangonana no tsara indrindra. Raha tsy afaka mandeha any anefa, mety ihany koa ny manatanteraka ny asa any an-tokantrano. Azo atao ihany koa amin’ny alalan’ny finoana, ny manao ny asa “à distance”, amin’ny alalan’ny finday, na “skype” … arak any tenin’I Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Na inona fehezinareo ety ambonin’ny tany dia hofeheziko any an-danitra, ary na inona na inona vahanareo ety ambonin’ny tany dia hovahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin’ny tany na amin’inona na main’inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin’ny Raiko izay any an-danitra izany” (Matio 18:18,19). Toy izao ny fanafahana na ny deliverance izay ataoa, aorian’ny vavaka izay ataon’ilay afahana sy ny mpanompon’Andriamanitra mandroaka ny devoly.
- Ny fanahy manambady no roahina voalohany amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazareta. Eo amin’ny tandrifin’ny taovam-pananahana, eo amin’ny lehilahy na eo amin’ny vehivavy no misy azy. Amin’ny alalan’ny afon’I Jehovah no andevonana mihitsy ilay fahanay ratsy, satria “Andriamanitra dia af mandevina” (Hebreo 12:29). Miteny hoe: “Amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazareta; ilay Tompon’ny fahefana hatrany an-danitra ka hatrety an-tany, no andevonana amin’ny alalan’ny afon’I Jehovah ny fanahy manambady, tsy manana fahefana na dia kely akory aza amin’izao mpanompon’Andriamanitra izao mandrakizay, potika sy levona ny fanahin’ny fahavetavetana sy fijangajangana fa tsy manankery mandrakizay mandrakizay”.
- Ny rao-dia indray no roahina manaraka. Ahevaheva eo amin’ny lohan’ilay misy ny asan’ny devoly ny Tànana havan’ilay mpanompon’Andriamanitra mandroaka devoly, ary atondro ny tongotra havia kosa ny tànany havanana. Roahina kosa amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazareta any amin’ny helo mirehitra afo, ny devolin’ny rao-dia.
- Ny fandika kosa etsy andaniny, ny Tànana havia ihany koa an’ilay mpanompon’Andriamanitra no ahevaheva eo ambony lohan’ilay marary, ny tànany havanana kosa manondro ny tongotr’ilay misy asan’ny devoly, ny tongony havanana. Dia roahina ihany amin’ny anaran’I Jesosy avy any Nazareta ny devolin’ny fandika.
Ao anatin’ny telo andro no anatanterahana izany asa izany!
Tsara marihina fa ny fanahy manambady dia mitarika devoly hafa ihany koa raha tiany. Ny tena akaiky azy sy miara-miasa aminy matetika, di any devoly kalanoro, ny vazimba, ary ny zazavavindrano, izay mbola ho hitantsika ihany amin’ny manaraka.
Pasteur RANDRIANARISOA Jean Aimé
6 votes. Moyenne 3.17 sur 5.